Hubso in lacagtu ay ka rabto halka aad rabto markii aad ku dhinto - Amjambo Africa
Waxa ugu dambaysa ee dad badani rabaan inay sameeyaan waa ka fikir dhamaadka noloshooda. Si kastaba ha noqotee, dadka intiisa badani waxay rabaan inay ka caawiyaan ka dhigista nolosha xubnaha qoyska, haddii ay awoodaan. Qaadashada tillaabooyin sahlan oo la xiriira akoonnada bangiga ayaa fududeyn doonta maaraynta guryaha lagu noolaado xubnaha qoyska ama ka-faa’iideystayaasha kale.
Haysta akoon bangi wuxuu magacaabi karaa ka-faa’iideystayaasha. Kuwaani badanaa waxay jecel yihiin kuwa dhintay, sida xubin qoyska ka mid ah, laakiin ka-faa’iideysteha wuxuu noqon karaa qof gaar ah ama shaqsiyaad ah. Ka-faa’iideysteyaashu sidoo kale waxay noqon kartaa hay’ad, sida hay’ad samafal oo samafal ah. Kuwa haysta koontada ayaa u qaybin kara lacagtii boqolkiiba ah in lagu qaybiyo ka-faa’iideystayaasha. Dadka ama sadaqooyinka ku taxan inay ka-faa’iideystayaashu waxay u baahan yihiin oo keliya inay muujiyaan caddeyn aqoonsi loogu talagalay lacagaha loo wareejiyo akoonkooda. Macaamilkan marna ma dhici karto in la qabto inta heysta akoonku uu weli nool yahay.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in lala xisaab qaato wadajir ah qof kale. Kadib haddii mid ka mid ah kuwa haysta koontada ay dhintaan, kan kale si fudud ayaa loo wareejiyaa koontada iyo dhammaan lacagaha mar la wadaagayo hadda ka tirsan qofkaas. Badanaa, akoonnadaani waxay u yihiin shakhsiyaadka iyo xubin qoyska ka mid ah ama lammaane ganacsi. Haysta kasta hayuhu wuxuu leeyahay marin buuxda oo xakameyn dhammaan lacagta akoonka wadajirka ah. Xisaabaadka wadajirka ah waxay yeelan karaan dib-u-dhacyo qaarkood. Midkood hayaha xisaabta ayaa ka bixi kara wax kasta ama dhammaan lacagta. Sababtaas awgeed, dadku waxay u baahan yihiin inay ka taxadaraan qof ay la wadaagaan koonto. Marka la barbardhigo, ku darista ka-faa’iideystayaasha koontada kaliya ayaa bixiya helitaanka lacagaha ka dib markii uu haystaha xisaabta dhintey.
Haddii kuwa haysta xisaabta bangiga ay dhintaan iyagoon dhigin koonto wadajirka ah ama liistada ka-faa’iideystayaal, hay’adaha maaliyadeed ma yaqaanaan waxa la sameeyo lacagaha. Qof kasta ama urur doonaya inuu kala baxo lacag ama xirmo akoonka qofka dhintay waa inuu bixiyaa dukumiinti sharci ah. Shuruuddan waxaa ka mid noqon kara booqashada maxkamada ee maxkamadda inay noqoto wakiilka shakhsi ahaaneed ee qofka dhintay iyo suurtagalnimada la shaqaynta qareen.
Si loogu daro ka-faa’iideystayaasha ama koonto wadajirka ah koontada bangiga waxay qaadataa dadaal yar oo dadaalka ah. Qaado talaabooyinka hadda si aad u abaabusho. Way fududahay oo waxay siisaa nabadgelyo maskaxeed.
PreviousMuhiim! Codso Ogolaanshaha Ogolaanshaha Shaqada ugu yaraan 6 bilood ka hor dhicitaanka taariikhda ruqsaddaada shaqada ee hada
NextKhayaanada naxdinta leh